DAE Myanmar – Division of Atomic Energy
No person shall, withoutalicense, utilize, produce, store, distribute or sell nuclear material, radioactive materials or irradiation apparatus.
No person shall without prior permission of the Department, import or export nuclear material, radioactive materials or irradiation apparatus.
Ref: Atomic Energy Law
The main objectives of DAE are as follows:
To carry out research works for the development of nuclear technology in the country
To carry out research, development and training in the field of atomic energy
To protect radiation hazards or to implement nuclear radiation protection
To coordinate with Government and Private Sectors for their nuclear technology applications and promotion
This facility is equipped with radiation detectors, spectrometer for high resolution spectrometry, X-ray fluorescence analysis (using both isotope sources and tube excitation), air samples for environmental monitoring.
DAE Policy, Mission & Prodecure
အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနအား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနစတင်ဖွဲ့စည်းချိန် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဌာနခွဲ (၄)ခု ဝန်ထမ်းအင်အား (၂၁၄) ဉီးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းချိန်၌ အဏုမြူစွမ်းအင် ဦးစီးဌာနသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနအနေဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား (၂၁၃) ဦးဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း လက်ရှိတွင် အရာထန်း (၃၁) ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၆) ဦး စုစုပေါင်း (၄၇) ဦးဖြင့်သာ ဌာနတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
လက်ရှိမူလဖွဲ့စည်းပုံသည် လွန်ခဲ့သည့် (၂၀)နှစ်ကျော်က ရေးဆွဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ခန့်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်/ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်သော ဥပဒေများ ထဲတွင် အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေ ပါဝင်ခဲ့ပါသဖြင့် အသစ်၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယား ဥပဒေအား ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားခဲ့ပြီးသော်လည်း ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 18/04/2022
အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနမှ သုတေသနလက်ထောက်(၂) ရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေငြာခြင်း 22/02/2022
To read in Myanmar Language
The DAE is composed with four departments:
Radiation Application Department
Reactor and Isotopes Department
The current strength of those departments is about 200 employees of which 25% are trainees.
A Handbook for the IAEA Model AP Annex II.en
Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations
Handbook of Internatinal Nuclear Safeguards
Nuclear Trade Export Import Control of Specified Non Nuclear Material and Equipment.en
CBRN Projects in Myanmar
Radiation Protection (Myanmar)